သိန် Cara vs rey Mysterio | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ပိုကောင်းသိန် Cara ပျံသန်း! Rey Mysterio အငယ်တန်းထက်
ဤရွေ့ကား IME: Ignacio Almancil ။ လက်စွပ် :: သိန် Cara ရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Mini ကိုအတ္ထုပ္ပတ္တိ: Ignacio Almancil (မွေးဖွားဒီဇင်ဘာလ 22 1982 ဆ) လက်ရှိအမည်ဖြင့်သိန် Cara အောက်မှာ WWE မှလက်မှတ်ရေးထိုးမျက်နှာဖုံးကြေးစားနနှစ်ဆပိုများလာ။
ရွေးစဉ်အတွင်း 25 ဧပြီလသိန် Cara SmackDown ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ SmackDown အပေါ် 29 ဧပြီလ! သိန် Cara Swagger နှင့်6မေလတိုင်ဆန် Kidd လုပ်ကြံ။ အဆိုပါ SmackDown အတွက် 13 မေလတွင်! သူမသည်ဒံယလေသ Bryan တိုက်ကြ၏။ အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုကြည့်ခဲ့သူ Chavo Guerrero, Bryan နဲ့သိန် Cara ရှုံး otvlk ။ အဆိုပါပွဲစဉ်ပြီးနောက် Chavo Guerrero အဆိုပါ Karoo ဂုဏ်ပြုဖို့လက်စွပ်ထဲသို့ဝင်, ဒါပေမယ့်သူပြုမိပါပြီနိုင်ကြောင်းယူဆသောကွောငျ့, Guerrero ပြုမူ vozmuschn ဖြစ်ခဲ့သည်။ သိန် Cara နှင့် Chavo ushl တွန်းချ။ SmackDown တွင် 20 များအတွက်မေလ Chavo Guerrero သိန် Cara ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့ကပြောသည်။ တကယ်တော့သူကအပြာရောင်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် Karoo ဦးဆောင်, သူ့ကိုသူသိတယ်အရာရာဆုံးမသွန်သင်တော်မူသောသူဖြစ်ခဲ့သည်။ Kara-သည်သူ၏အကူအညီမပါဘဲဒံယလေသ Bryan ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြပါဘူး။ သိန် Cara ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က 15 မိနစ်ဖန်ဆင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ5ထက်လျော့နည်းစေမည်။ ထိုအခါကန့်သတ် 2011 ကျော်မှာသိန် Cara အနိုင်ယူဖို့သူပင်လျော့နည်းအချိန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရိုင်ယန် vs. ပွဲ Guerrero အတွက်ပွဲ5မိနစ်ကြာရှည်မည်ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Chavo အနိုင်ရနှင့်လက်စွပ်ထဲက Bryan ပစ်ချလို့မရဘူး။ သိန် Cara ထွက်. Chavo Hurricanrana provl ။
ပြန်ကြားရေး: zomboyaschika ရေချိုးရာမှပြိုင်ဖက်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်
ပိုကောင်းသိန် Cara ။
Rey Mysterio တိုက်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါနှစ်ဦးစလုံးသူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကောင်းသောပြိုင်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းသိန် Cara အားလုံးအတူတူပင်။